Dining table and beyond Itafile Enetafile Eguqulwayo - Imagazini yoyilo
Itafile Enetafile Eguqulwayo
Itafile Enetafile Eguqulwayo Le tafile inokwazi ukuhlengahlengisa umphezulu wayo kwimilo eyahlukeneyo, izixhobo, ukwakheka kunye nemibala. Ngokuchasene netafile eqhelekileyo, nethebhulethi yayo isebenza njengomphezulu osisigxina wezinto zokuncedisa (iiplates, iiplate zokuncedisa, njl.njl), ezi zinto zetafile zisebenza njengobuso kunye nezinto ezisetyenziswayo. Ezi zixhobo zinokudityaniswa ngendlela eyahlukeneyo kunye nenobukhulu ngokuxhomekeke kwiimfuno zokutya. Olu kuyilo olwahlukileyo nolunobuchule luguqula itafile yokutyela yesiqhelo ibe yindawo enamandla eguqulweyo ngokulungiswa kwakhona kwezixhobo ezilungisiweyo.
Igama leprojekthi : Dining table and beyond, Igama labayili : Athanasia Leivaditou, Igama lomthengi : Studio NL.
Itafile Enetafile Eguqulwayo Athanasia Leivaditou Dining table and beyond